SAWIRRO: Hoggaamiyaha W/Kuuriya oo hanjabaad kulul u diray Mareykanka – Warfaafiye:
SAWIRRO: Hoggaamiyaha W/Kuuriya oo hanjabaad kulul u diray Mareykanka
Waqooyiga Kuuriya ayaa si caro leh uga jawaabay cunaqabateynada cusub ee uu Golaha Ammaanka habeen hore meel-mariyay in la saaro xukuumadda Pyongyang ee dalkaasi Waqoojiya Kuuriya, waxaana ay ku tilmaameen cunaqabateyn “xaaraan” ah.
War qoraal ah oo kasoo baxay xafiiska hoggaamiya dalkaasi Kim Jong-Un ayaa lagu cambaareeyay go`aanka cunaqabateynta cusub ee Golaha Ammaanka, kaas oo ay sheegeen in uu dabada ka riixayo Mareykanka islamarkaana uu yahay go`aan xaaraan ah. Qoraalka ayaa sioo kale lagu sheegay in cunaqabateyntan uu dabada ka riixayo Mareykanka uu caddeynayo in xukuumadda iyo shacanta Waqooyiga Kuuriya ay ku saxsanaayeen go`aankii ay qaateen ee ahaa in ay sameystaan hubka wax gummaada.
Ciidanka iyo hubkooda ayaa qoraalka lagu sheegay in ay laba jibaari doonaan si loogu ilaaliyo qaranimada iyo sumcadda dalkooda. Cunaqabateyntan cusub oo laga soo qafiifiyay sidii hore ee uu Mareykanku damacsanaa ayaa waxaa markii hore ka hor yimid dalalka Shiinaha iyo Ruushka, waxaana meesha laga saaray si ay u taageeraan in laga baxsho liiska u dhoofinta saliidda oo loo baday gaaska dabiiciga ah.
Waxaa lagoo laga mamnuucay in dalkaasi loo iib geeyo dhammaan dharka iyo waxyaalaha laga sameeyo. Dhanka kale madaxweynaha Mareykanka ayaa sheegay in cunaqabateyntan cusub ay ka adag tahay kuwii horay waddankaasi loo saaray islamarkaana si dhakhsi ah lagu dareemi doono.